Ciidamada ammaanka oo maanta qabtay hub iyo rasaas ay Shabaab ku aasteen guryo ku yaalla Deyniile – Radio Muqdisho
Ciidamada ammaanka oo maanta qabtay hub iyo rasaas ay Shabaab ku aasteen guryo ku yaalla Deyniile
Ciidamada Nabad sugidda Iyo Sirdoonka Qaranka ayaa maanta gacanta ku soo dhigay hub ay maleeshiyaadka Shabaab ku aasteen god ku yaala degmada Deyniile ee go0bolka Banaadir.
Qabashada hubkan ayaa yimid kadib howlgalka ay maanta ciidamadu ka sameeyeen degmada Deyniile, hubkaas oo isugu jira qoryo farabadan bistoolado iyo rasaas farabadan oo ay lahaayeen maleeshiyaadka Kooxda Ugus Ay ku asteen Guryo ciidamadu ay Baritaano ka sameyeen kuwaas oo ku yaala Deyniile.
Dhinaca kale mas’uliyiinta Hayadaha Amniga ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay qabteen Gaari walxaha Qarxa laga soo buuxiyey iyo ninkii watay, kaasoo la doonayay in lagu dhibaateeyo dadka rayidka ah.
Afhayeenka wasaaradda Amniga Gudaha Maxamed Yuusuf Cisman oo warbahinta Qaranka Kula Hadley xafad ka mid ah degmada Deyniile oo maanta ciidamadu howlgalka hubka lagu qabtay ka sameeyeen ayaa sheegay in ujeedada howlgalkani yahay adkeynta iyo sare u qaadidda ammaanka Muqdisho.
Sidoo Kle Afhayeenka ayaa xaqiijiyay in howlgalka lagu soo qabtay hub iyo rasaas farabadan oo maleeshiyaadka Shabaab ku aasteen guryo ku yaala xaafadaha degmada Deyniimle.
Wuxuu intaa ku daray Afhayeenka in ciidamada Booliisku ay magaalada Muqdisho ku qabteen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay iyo ninkii watay , isagoo intaa raaciyay in tani ay ku timid geejignaanta iyo geyfanaanta ciidamada amaanka.
Hayadaha Amniga Dowladda ayaa laba Jibbaaray howl-gallada lagu adkeeynayo amniga loogana hortagayo kooxda gummaadka ummadda Soomaaliyeed ee UGUS.
Dowladda Sacuudiga oo abaabushay isbaheysi melateri oo la dagaalama Xuutiyiinta Yemen